कोरियामा रहेका विदेशी नागरिकहरुले फेव्रुअरी भित्रै बार्षिक कर विवरण पेश गर्नुपर्ने ! – Kantipur Press
कोरियामा रहेका विदेशी नागरिकहरुले फेव्रुअरी भित्रै बार्षिक कर विवरण पेश गर्नुपर्ने !
दक्षिण कोरियामा रहेका सम्पूर्ण विदेशी तलबी कामदारहरुले बर्षभरीको कर सम्बन्धी सेटलमेण्टका लागि आफ्नो बिरबरण बुझाउनुपर्ने यहाँको कर एजेन्सी संस्थाले आइतबार जानकारी दिएको छ। कोरियन नागरिकहरु सरह यहाँ रहेका बिदेशी कामदारहरुले पनि यस सम्बन्धि बिवरण पेश गरी कर सेटलमेण्ट गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
कोरियाको नेशनल ट्याक्स सर्भिज (एनटिएस) ले विदेशी कामदारहरुलाई कर सेटलमेण्टका लागि सहयोग पुर्याउनका लागि विभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराएको छ। नेशनल ट्याक्स सर्भिसका अनुसार कोरियामा रहेका दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने कामदारहरु बाहेक सम्पूर्ण विदेश कामदारहरुले सन २०२१ को बर्ष अन्त कर अर्थात 연말정산 विवरण फेब्रुअरी महिनाको तलब थाप्ने दिनभन्दा अघि नै पेश गरिसक्नुपर्नेछ। तर यदि फेब्रुअरी महिनाको तलब थाप्ने दिन फेब्रुअरी महिनाको अन्तिम दिन भन्दा पछि रहेको अवस्थामा फेब्रुअरीको अन्तिम दिन सम्ममा यस्तो विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गरिसक्नुपर्ने बताइएको छ।
कोरियामा रहेका विदेशी कामदारहरुलाई यस सम्बन्धि विवरण पेश गर्ने अन्तिम मिती कोरियन कामदारहरु सरह नै रहेको छ। उनिहरुले आयकर तथा अन्य करहरु सम्बन्धि रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक कागजपत्र आफ्नो कम्पनीमा बुझाउनुपर्दछ। कामदारहरुले सिधै कर कार्यालयमा बुझाउने नभइ आफ्नो कम्पनीमा बुझाउने तथा उक्त कम्पनीले कर कार्यालयमा बुझाउने प्राबधान रहेको छ।
यसरी बुझाइएको रिपोर्टहरुका आधारमा बर्षभरीको कर रकम मिलान गरि यदि कामदारले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढि तिरिएको खण्डमा कर फिर्ता पाउँदछन भने तिर्नुपर्ने रकम भन्दा कम मात्र तिरिएको अवस्थामा थप कर तिर्नुपर्ने हुन सक्दछ। यस बर्षदेखि कोरियाका कर कार्यालयहरुले विदेशी कामदारहरु लक्षित गरि अझ सरल र सहज तरिकाले कामदारको कर मिलान सम्बन्धि विवरण उक्त कामदारको कम्पनीमा पठाउन सुरु गरेको छ।
कोरियाको नेशनल ट्याक्स सर्भिस (एनटिएस) ले यहाँ रहेका कम्पनीहरुलाई आफ्नो कम्पनीमा काम गर्ने विदेशी कामदारहरुको 연말정산 विवरण पेश गर्न तथा यस सम्बन्धि सहजिकरण गरिदिनका लागि समेत अनुरोध गरेको छ। एनटिएसले अंग्रेजी भाषामा यस सम्बन्धि जानकारी आफ्नो वेवसाइटमा राख्नुका साथै हटलाइन समेत स्थापना गरेको छ। अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध हुने १५८८-०५६० नम्मरको हटलाईन एनटिएसले सुरु गरेको छ। यस सम्बन्धि जानकारी तलको भिडियोबाट लिनुहोस।
कोरियाले बनायो नाक मात्रै छोप्ने मास्क,समर्थन भन्दा आलोचना बढी …..
थप यति सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक कोरिया उडदै !